Insizakalo - Chinatown Grain Machinery Co., Ltd.
Sakhe uhla lwemishini nezixazululo zobuchwepheshe kulo lonke okusanhlamvu, uwoyela odliwayo kanye nomkhakha wokucubungula ukudla, njengokuqoqa, ukugcina, ukuhlanza, ukugreda, ukugawula, ukugaya, ukuxuba, ukukhiqiza, ukwakha ukwakheka nokupakisha.
Njengomhlinzeki wezixazululo zezimboni, sihlinzeka okungaphezulu kakhulu kwemishini, kepha izixazululo ezisebenzayo zokukhiqiza ezingathuthukisa uchungechunge lwamanani lwamakhasimende. Ngesikhathi sokuthuthuka, asikaze sizibale noma yiziphi izinkinga namathuba okuphelelisa imikhiqizo yethu, futhi yileyondlela esingagcina ngayo isikhundla sethu sokuhola embonini.
Imishini yethu isetshenziswa kakhulu kubasebenzisi abaningi basekhaya. Futhi amaphrojekthi ethu okuvula-ukhiye nemishini eyodwa yathunyelwa eThailand, eBurma, e-Australia, eSri Lanka, e-Italy, eJalimane, eChile, e-Argentina, eBrazil, e-Ukraine nakwamanye amazwe nezifunda ezingaphezu kuka-20. Amakhasimende amaningi emhlabeni jikelele avakashele inkampani yethu kwezamabhizinisi.Siyakwamukela ngokufudumele amaklayenti futhi sinikeze izixazululo ezinhle kakhulu ngemishini esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe, futhi sithole ukuqashelwa okuphezulu kubo.